I-De Bougainvilla kufuphi neLake Fatehsagar-imizuzu emi-2 ukuhamba - I-Airbnb
I-De Bougainvilla kufuphi neLake Fatehsagar-imizuzu emi-2 ukuhamba
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguSuman
Ifakwe ngokugqibeleleyo kumazantsi eenduli ze-Aravali kunye nokuhamba ngemizuzu emi-2 ukuya eLake Fatehsagar, le Boho Villa iphangaleleyo ikukhathalele konke ukonwaba kwakho. Yipropathi eqaqambileyo nephangaleleyo efunxa uxolo kunye nokuzola kwechibi elijikelezileyo kunye neentaba. Indlu iya kukwenza uzive uhlaziyekile kwaye igcinwe ngezinto zakudala ezivela kwingqokelela yomnini.
Amagumbi okulala ama-2: anebhedi enkulu kunye nezindlu zangasese ezincanyathiselweyo (iiyure ezingama-24 kushushu namanzi abandayo)+ igunjana lempahla kunye nempahla yokubeka imithwalo (iibhedi ezongezelelekileyo ziyafumaneka xa uceliwe)
Indawo yokuhlala: enesofa ezinkulu kunye neecushion ezitofotofo
Indawo yokutyela + Ikhitshi: ene-microwave, ifriji, umatshini wekofu, izinto zokupheka, izitya, kunye nendawo yokwazisa.
Ngaphandle: Indawo yokutyala egcinwe kakuhle enendawo yokuhlala kunye nebarbeque, ilungele isidlo sakusasa kunye netheko langokuhlwa.
Kubandakanya - I-snacks ezongezelelweyo, i-high-speed-wifi, i-smart TV, indawo yokuhlamba impahla yangaphakathi, i-hotel-quality linens kunye neetawuli, i-slippers, kunye ne-coffee and tea sachets kunye ne-barbeque.
Ikhaya lethu lisikelelwe ngeyona ndawo intle kwaye ipholile. Ijikelezwe ziinduli zeAravali. Ukuhamba ngokukhawuleza kwe-10 min ukunyuka induli kukunika umbono opheleleyo wesixeko. Usenokungafuni ukuphoswa ziipikoko. Ichibi leFatehsagar phakathi kwemizuzu emi-2 ukusuka kwipropathi ikunika intaphane yokubona, ukukhwela ibhayisekile, ukuhamba, kunye nendawo yokutyela eyiyo yokwenyani.
Umbuki zindwendwe ngu- Suman
Siyi-24/7 ekhoyo ukuze sithuthuzele iindwendwe. Zive ukhululekile ukufowunela, usithumelele umyalezo nangaliphi na ixesha.